Izikhokelo ezitsha zeCDC zabantu baseMelika kwi-Omicron Covid Variant B.1.1.529
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Izikhokelo ezitsha zeCDC zabantu baseMelika kwi-Omicron Covid Variant B.1.1.529
Iindaba zeMpilo • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ingxelo ye-CDC malunga nendlela yokuqonda ngokuthe ngqo uhlobo olutsha lwe-Covid Variant Omicron
Ngomhla wama-26 kaNovemba, i-2021, i-World Health Organization (WHO) yahlula inguqu entsha, i-B.1.1.529, njengeNgcaciso yeNxalanyeko kwaye ibize ngokuba yi-Omicron. Akukho ziganeko zalo mahluko zichongwe e-US ukuza kuthi ga ngoku.
I-CDC ilandela iinkcukacha zolu hlobo lutsha, oluxelwe okokuqala kwi-WHO nguMzantsi Afrika. Siyabulela kurhulumente waseMzantsi Afrika kunye noosonzululwazi bakhe abathe banxibelelana ngokuphandle noluntu lwehlabathi lwezenzululwazi kwaye basaqhubeka nokwabelana ngolwazi malunga nalo mahluko kunye neSebe lezeMpilo lase-US kunye neeNkonzo zoLuntu kunye ne-CDC. Sisebenza namanye ama-US kunye nezempilo yoluntu jikelele kunye namaqabane amashishini ukuze sifunde ngakumbi malunga nalo mahluko, njengoko siqhubeka nokubeka iliso kwindlela yawo.
I-CDC isoloko ibeka iliso kwizinto ezahlukeneyo kwaye inkqubo yokucupha eyohlukileyo yase-US ifumanise ngokuthembekileyo izinto ezintsha ezahlukeneyo kweli lizwe. Silindele ukuba i-Omicron ichongwe ngokukhawuleza ukuba ivela e-US
Siyayazi into efunekayo ukunqanda ukusasazeka kwe-COVID-19. I-CDC icebisa ukuba abantu balandele izicwangciso zokuthintela njengokunxiba imaski kwindawo yangaphakathi yoluntu kwiindawo eziphakamileyo okanye eziphezulu Ukuhanjiswa koluntu, ukuhlamba izandla rhoqo, nokuba kude nabanye. I-CDC ikwacebisa ukuba wonke umntu oneminyaka emi-5 nangaphezulu azikhusele kwi-COVID-19 ngokufumana ugonyo ngokupheleleyo. I-CDC ikhuthaza idosi yokukhuthaza ugonyo lwe-COVID-19 kwabo bafanelekileyo.
Abahambi abaya e-US kufuneka baqhubeke nokulandela CDC iingcebiso zokuhamba.
I-CDC iya kubonelela ngohlaziyo njengoko ulwazi oluninzi lufumaneka.